China High carbon steeel fram ankizy bisikileta / mpanamboatra bisikileta ankizy 12 inch | Beimudou
Paikady steeel avo lenta an'ny ankizy / bisikileta ankizy 12 santimetatra
Voalohany indrindra, tokony hifidy bisikileta sahaza ho an'ny zanatsika isika. Ampirisihina hisafidy karazana hazavana somary maivana, mitaingina ary mihodina miovaova, tsara kokoa ny manana bearings vy, mazàna kodiarana mazava, fanoherana mitafy mafy, ary ny frein koa tokony mailo amin'ny fanaovana.
ara-nofo Fram vy mahery
Size 12 ”14” 16 ”18”
Loko Volomboasary, mavo, mainty, manga na araka ny ilainao
Haben'ny fonosana 72 * 19 * 38cm / 12inch80 * 19 * 40cm / 14inch86 * 19 * 42cm / 16inch
filanjana Tora-by vy mahery karbaona
Bara fikoloana Bara vita amin'ny Cove miaraka amina fitaovana ara-tontolo iainana
fangejan'ny Sariaka amin'ny tontolo iainana
Remina eo aloha Vaky caliper
Remina any aoriana Vakira tarika
Vatosaky ny freins Plastika BMX, L / R
sisiny Firaka aluminium
kodiarana 1.95,2.125,2.4 miaraka amin'ny tsipika kodiarana
Coverfull rojo fonosana rojo
Paositra seza Taratasy fampidirana W / azo antoka, fonosina amin'ny foam-PE
Famotsorana haingana Firaka aluminium
Lasely Lasely azo entina
Pedal W / taratra misy baolina
Kodiarana fanofanana Kodiarana fanatanjahan-tena tongotra sy plastika
Fonosana 100% ckd, 50% skd85% skd, boaty a / b; 1pc / baoritra, 2pcs / baoritra, 4pcs / baoritra na ilainao
Ahoana ny fomba hampianarana ny ankizy mitaingina bisikileta?
Rehefa mianatra mitaingina bisikileta dia alao antoka fa hoentina any amin'ny toerana azo antoka, fisaka sy malalaka io. Ny fipetrahan'ny bisikileta dia tokony ahitsy amin'ny toerana mety amin'ilay zaza. Avelao aloha ny zaza hanandrana hikorisa amin'ny tongony amin'ny tany. Mandritra ny dingan'ny fivezivezena dia hahafehy tsikelikely ny herin'ny tanany sy ny fifehezana ny làlan-kalehany Izy io dia afaka misafidy hantsana kely amin'ilay toerana hikorisa, amin'ny alàlan'ny fidinan'ny fidinana ambany, fampiasana tsara lavitra ny fanaraha-maso.
Rehefa avy mihetsiketsika amin'ny tongotra roa ianao dia afaka manandrana mikorisa amin'ny tongotra iray, izany hoe mametraka ny tongony iray amin'ny tongotra ary manandrama mikorisa mandroso. Ny fivezivezena amin'ny tongotra iray dia mamela ny zaza hifanaraka amin'ny tongotra, amin'ny dingan'ny fivezivezena dia afaka misafidy ihany koa manitsaka tongotra iray.
Aorian'ny fifehezana ireo fomba roa voalohany, dia mora be ny mitaingina. Amin'izao fotoana izao, ny ankizy dia azo ampirisihina hanitsaka ny pedal. Rehefa manitsaka ny pedal isika dia tokony hitandrina ny maso tsy maintsy mijery mialoha fa tsy amin'ny tongotra. Rehefa afaka fotoana vitsivitsy dia afaka mandeha moramora. Mianara mitaingina fotsiny rehefa tsy tokony ho miadana ny hafainganam-pandeha, manaova fiolahana bebe kokoa ary fihenan'ny frein.
Teo aloha: Bisikileta ankizy mora vidy mandritra ny 3 ka hatramin'ny 5 taona / 2019 bisikileta mafana amidy ankizy
Manaraka: Bisikileta an-tendrombohitra haingam-pandeha 26 mirefy lehilahy
Bisikileta herinaratra ho an'ny ankizy
Ankizy Quad Bike
Bisikileta ankizy mora vidy mandritra ny 3 ka hatramin'ny 5 ye ...
Ankizy Ankizy Bisikileta amin'ny bisikileta / 14 inch B ...
Bisikileta fandanjalanjana mavokely, Bisikileta fandanjana ankizy, Bisikileta / bisikileta 20 santimetatra, Bisikileta mandanjalanja, Bisikileta mandanjalanja, Bisikileta,